Qayb kalo Muhiim ah oo ka mid ah Qarannimaddi Ummadda Soomaaliyeed oo dib loo soo Riday. – Xeernews24
Qayb kalo Muhiim ah oo ka mid ah Qarannimaddi Ummadda Soomaaliyeed oo dib loo soo Riday.
17. Februar 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Cali Axmed Jaamac “Jangali” ayaa xarunta ICAO ee Montreal ee dalka Canada kula kulmay Madaxweyana ICAO Dr. Olumuyiwa Benard Aliu oo u dhashay dalka Nijeria waxayna ka wada hadleen sidii loo dardar galin laha soo dhameystirka qalabka hagidda diyaaradaha ee loo iibinayo Soomaliya.
Qalabkaasi waxaa lagu rakabi doonaa siddeed garoon oo ka mid ah Soomaaliya iyo xarunta cusub ee laga hagi doono hawada Soomaaliya ee dhawaan laga dhisay Garoonka Muqdishu, ayadoo marka la dhameystiro ka dib ay Soomaaliya inta badan hawadeeda aanay ka dhici doonin xidhiidh xumo, waayo qalabka cusub ee laga dalbay Shirkad Talyaani ah ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay yeelato VHF Coverage si Soomaaliya ula mid noqonayso dhamaan dawladaha deriska ah.
Waxay isla qaateen Wasiir Jangali iyo Guddoomiye Dr Aliu in qalabkaani uu dabooli doono baahida xoojinta xidhiidhka hawada ee maamulka hawada Soomaalia korna uu u qaadaysa shaqada loo qabto diyaaradaha dulmara Soomaalia, ayadoo nabadgalyadooduna ay wanaagsanaan doonto. Sidoo kale waxaa kordhi doono dhaqaalaha laga qaadi doono diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya.
Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday in la dardargalin doono kobcinta aqoonta shaqaalaha iyo kuwa cusub ee la qorayo si marka loo guuro Muqdisho ay dawladda Soomaaliyeed noqoto mid isku filan.
Kulankan ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan soona dhowaysay waqtigii hawada Soomaaliya laga hagi lahaa Soomaaliya. waxaa wasiir Jangeli uga mahad celiyey Guddoomiyaha Golaha ICAO (ICAO COUNCIL) iyo madaxda ICAO wada shaqeyntii wanaagsanayd ee ay la lahayeen intii uu hayey xilka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada.
Ugu danbeyntii wuxuu Guddoomiye Dr. Aliu ballan qaaday inuu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Feederaalka Soomaaliya Mudane Moxamed Cabdillahi “Farmaajo” uu si dhakhsi ah warbixin uga siin doono arrintan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/02/ICOA.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-02-17 09:36:572017-02-17 09:36:57Qayb kalo Muhiim ah oo ka mid ah Qarannimaddi Ummadda Soomaaliyeed oo dib loo soo Riday.
Marka la isku wada daro in ka yar hal Sanno dawlada Djibouti waxay maamulka... Madaxweyne Farmaajo oo safarkii u horeeyay dalka uga ambabaxaya (Dalkee ayuu...